अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट के हो र कसरी काम गर्छ ? – Sky News Nepal
कोरोना संक्रमितलाई किन चाहिरहेको छ धेरै अक्सिजन ?
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार १३:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ — पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बिरामीहरु अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएयता नेपालमा सयौंको मृत्यु भइसकेको छ । अस्पताल र होम आइसोेलेसनमा अक्सिजन अभावमा बिरामी छट्पटाइरहेका छन् ।
प्राण वायुका रुपमा रहेको अक्सिजन जैविक प्राणीलाई नभई नहुने एक महत्वपूर्ण ग्यास हो ।श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मुख्य भूमिका यसैको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ०की हेड अफ क्लिनकल केयर डा।ज्यानेट डियाज भन्छिन्,‘शरीरका कोषहरुको सञ्‍चालनका लागि अक्सिजन नभई नहुने चिज हो । शरीरको सामान्य कार्य सञ्चालनका लागि यो महत्वपूर्ण छ ।’ अक्सिजन अभावमा शरीरका कोषिकाहरुले काम गर्न छाड्ने र मर्ने गर्छन् । अर्थात् शरीरका हरेक अंग र भागहरुलाई काम गर्नका लागि अक्सिजन चाहिन्छ । अक्सिजन अभावमा शरीरले काम गर्न छाड्छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहरका बिरामीहरुलाई अक्सिजनको निकै आवश्यकता देखिएको छ । संक्रमितहरुको रगतमा अक्सिजनको मात्रा धेरैले घट्ने गरेको छ । जसका कारणले बिरामीहरुलाई अक्सिजन चाहिरहेको छ । युथ फर नेपाल एवं योङ डक्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा। निकोलस भुसालका अनुसार कोरोना संक्रमण भएपछि भाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्छ ।
फोक्सोको इन्फेक्सन भएपछि कोरोनाले निमोनिया गराउँछ । निमोनिया अर्थात् फोक्सोको इन्फेक्सन भयो भने फोक्सोले जसरी काम गर्नुपर्ने त्यसरी गर्न सक्दैन । त्यसका लागि अक्सिजनको प्रवाह पनि कमी हुन्छ । त्यसैले बाहिरबाट अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन थालेपछि अन्य अंगहरुले पनि काम गर्न छाड्ने डा। डियाज बताउँछिन् ।
बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अस्पताल बर्मिघंमको इमरजेन्सी मेडिसिनमा कार्यरत डा।राज झाका अनुसार एउटा स्वास्थ्य मानिसलाई सामान्य अवस्था अक्सिजनको मात्रा न्यूनतम ९४ प्रतिशत हुनुपर्छ । दमका बिरामी तथा अन्य रोगीहरुका लागि ८८ देखि ९२ प्रतिशत हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा वयष्क मानिसले हरेक एक मिनेटमा ७ देखि ८ लिटर हावा लिन्छ । लिएको हावामा करिब २१ प्रतिशत मात्रै शुद्ध अक्सिजन हुने उनले बताए । सरदर एक स्वस्थ्य मानिसलाई दैनिक ५ सयभन्दा बढी लिटर शुद्ध अक्सिजन चाहिने उनी बताउँछन् ।
डा। झाका अनुसार लक्षण देखिएको र सास फेर्न गाह्रो भएका बिरामीहरुलाई अक्सिजन चाहिन्छ । निमोनिया देखिएका र श्वास फेर्न गाह्रो भएकाहरुलाई अक्सिजन चाहिन्छ । डब्लूएचओको आपत्कालीन निर्देशिकाअनुसार कोरोनाका सबै सिकिस्त र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुलाई अक्सिजन थेरापी अनिवार्य भनिएको छ । बच्चालाई न्यूनतम १ देखि २ लिटर प्रति मिनेट र व्यस्कलाई ५ लिटर प्रति मिनेटको दरमा अक्सिजन दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कोरोनाका सबै सिकिस्त बिरामीहरुलाई सिलिन्डरबाट शुद्ध अक्सिजन दिनुपर्ने डा।भुसाल बताउँछन् । जब कुनै बिरामीलाई एक मिनेटमा धेरै मात्रामा अक्सिजनको आवश्यक पर्छ तब सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिन थालिन्छ । सामान्य रुपमा श्वास फेर्न केही असहज भएका बिरामीहरुलाई कन्सन्ट्रेटरबाट अक्सिजन दिने गरिएको उनले बताए ।
अक्सिजन प्लान्ट पनि एक प्रकारको कन्सन्ट्रेटर जस्तै हो । यसले पनि वातावरणमा भएको हावाबाट नै अक्सिजन निकाल्ने गर्छ । यसबाट तरल र ग्यास अवस्थाको दुवै अक्सिजन निकाल्न सकिने डा।भुसालले बताए । वातावरणमा लिएको हावाबाट नाइट्रोजनलाई छुट्टाउने,त्यसपछि अनि अन्य ग्यासहरुलाई हटाएर शुद्ध अक्सिजनलाई कम्प्रेस गरेर अक्सिजन उत्पादन गरिन्छ ।
यो एउटा यस्तो उपकरण हो जसले शरीरको चाल९पल्स०लाई विश्लेषण गरेर यो अक्सिजनको मात्रा देखाउँछ । सामान्यतस्मानिसमा अक्सिजनको स्याचुरेसन लेभल ९४ प्रतिशत हुने डाक्टर झा बताउँछन् ।
बालबालिकाहरुमा अक्सिजनको स्याचुरेसन लेभल ९५ देखि माथि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वृद्धहरुमा स्याचुरेसन लेभल९० लाई न्यूनतम मान्न सकिने उनले बताए । सामान्य अवस्थामा स्याचुरेसन लेभल ९४ प्रतिशत हुनुपर्ने डा।झा बताउँछन् ।(कान्तिपुर)